Ifulethi lase-Hacienda eline-Private Outdoor Hot Spring
(192 okushiwo abanye)
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Glenn
Leli fulethi elihle nelizimele elinegumbi lokulala eli-1 litholakala e-Historic Hot Spring Bathhouse enkabeni yedolobha iQiniso noma Imiphumela. Kungakapheli imizuzu emi-5 ibanga lokuhamba ngezinyawo lomfula i-Rio Grande, indawo yokuphuza utshwala, isitolo sekhofi, ithiyetha yamamuvi, amagalari obuciko, isitolo segrosa, istudiyo se-yoga, izitolo ezithengisayo, nokuningi!
Uzokwazi ukucwilisa ngaphansi kwezinkanyezi kuminerali yakho yangasese eshisayo (!) eduzane novulandi onomthunzi.
Uzoqiniseka ukuthi uyalithanda leli fulethi elinegumbi lokulala eli-1 elilungiswe kahle elinompheme wakho onomthunzi kanye nebhavu langasese lamanzi amaminerali ashisayo. Imibala yayo egqamile ehlanganiswe nomhlobiso wesimanje wamaphakathi nekhulunyaka kanye nefenisha iyenza ibe indawo eyingqayizivele nengalibaleki. Ukuphunyuka okuphelele empilweni yakho yansuku zonke.
Izivakashi zikwazi ukufinyelela kuzo zonke izinsiza ezihlanganisa nokusetshenziswa kwebhavu lamaminerali ashisayo. Sicela ukuthi izihambeli zikhawulele ukucwiliswa emanzini izikhathi ezingu-2-3 ngosuku ukuze zicabangele umsingathi nezinye izihambeli.
Ngokuvuma ukubhukha indawo yokuhlala e-The Hacienda Apartment, uyavuma ukuthi (1) uzobe ucwile eziphethwini ezishisayo ngengozi YAKHO. futhi (2) izihambeli azivunyelwe neze ukumema noma ukusingatha okungezona izivakashi endaweni ngaphandle kwemvume yangaphambili yosokhaya. Isivakashi sizoba nesibopho senhlawulo engu-$200 kusivakashi esingabhalisiwe ngasinye.
4.91(192 okushiwo abanye)
4.91 · 192 okushiwo abanye
I-Downtown Truth or Consequences ihlezi phezu kwe-aquifer yamanzi asendulo abaningi abakholelwa ukuthi inamandla okwelapha. Leli fulethi lisendaweni eyimizuzu emi-5 yokuhamba ngezinyawo ukuya esitolo segrosa, istudiyo se-yoga, izitolo zekhofi, indawo yaseshashalazini yamamuvi, izitolo ezithengisa ukudla, iRio Grande nokunye okuningi.
Ngeke ngibe khona ngesikhathi sokuhlala kwakho kodwa ngitholakala ngombhalo noma ngocingo.